DEG-DEG: Real Madrid Oo Markale Lagu Qasbay In Ay War Saxaafadeed Ka Soo Saarto Wararka La Xidhiidhinaya Xidiga Paris Saint-Germain Ee Neymar Jr. – Laacib.net
Kooxda Real Madrid ayaa si lama filaan ah war saxaafadeed kale uga soo saartay wararkii cusbaa ee la xidhiidhinayay xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr. Warbaahinta Brazil ee Globesporte ayaa shaaciyay in maamulka Real Madrid ay Juni Calafat amar ku siiyeen in uu wada xaajood la furo Neymar Jr aabihii si ay ula soo saxiixan karaan xidiga ree Brazil inta uu suuqa xagaagani furan yahay laakiin Madrid ayaa markale soo saartay war saxaafadeed ay arintan ku biinisay.
Ma aha markii ugu horaysay ee ay Real Madrid war saxaafadeed ka soo saartay wararka la xidhiidhinaya Neymar Jr iyo Mbappe waana markii saddexaad ee ay xaalada xidiga kooxda PSG war ka soo saartay si ay u beeniso warar ay saxaafadu qortay oo maamulka Madrid la xidhiidhinaya Neymar ama Mbappe.
HALKAN KA DHAGEYSO WARKA NAYMAR KU SAABSAN
War saxaafadeed ay hadda soo saartay Real Madrid ayaa lagu yidhi: ” Iyada oo la tixgalinayo wararka joogtada ah ee kooxdeedana lagula xidhiidhinayo xidiga PSG ee Neymar Jr, kooxda kubbada cagta Real Madrid waxay doonaysaa in ay kala cadayso in ayna qorshayn in ay wax dalab ah u gudbiso ciyaartoyga”.
War saxaafadeedka Real Madrid ayaa la sii raaciyay: ” Xidhiidhka labada kooxood u dhexeeyaa waa mid aan caadi ahayn, sidaa daraadeed, haddii ay waqti Real Madrid tixgalin lahayd in ay ciyaartoy PSG ah la soo saxiixato, waxa ugu horeeya ee ay kooxdu samayn lahayd waxa uu noqon lahaa in ay si rasmi ah kooxda ula xidhiidho”.
War saxaafadeedka ay markale Real Madrid soo saartay ayaa ah mid qariib ah iyada oo hore u shaacisay in ayna wax dalab ah ka gudbin xidiga ree Brazil iyo waliba Mbappe laakiin arintan ayaa u muuqata in maamulka Real Madrid ay kaga baxsanayaan in maamulka PSG ay ka dacweeyaan FIFA.
Madax waynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi ayaa si adag ugu celceliyay in Neymar Jr iyo xidigaha muhiimka ah ee kooxdiisu ayna ka bixi doonin Paris isla markaana ay wadaan qorshihii ay ku sii xoojin lahaayeen mashruuca kooxdooda.
Dhinaca kale maamulka madax wayne Nasser Al-Khelaifi ayaa wada qorshe ay Neymar Jr kaga saxiixanayaan heshiis cusub kaas oo mushaarkiisa sare loogu qaadayo si aanu uga fikirin wararka Real Madrid la xidhiidhinaya.
Si kastaba ha ahaatee, war saxaafadeedka ugu danbeeyay ee ay Real Madrid soo saartay ayaa ugu yaraan meesha ka saaraya wararkii cusbaa ee sheegayay in ay haddaba wada xaajood kula jiraan Neymar aabihii taas oo ayna PSG raali ka ahayn.